सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपामा बस दुर्घटना, सातको मृत्यु, ५० बढी घाइते - नेपालबहस
सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपामा बस दुर्घटना, सातको मृत्यु, ५० बढी घाइते
२४ असोज, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० भोटसिपास्थित बडहरे चोकमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ ।
इन्द्रावती गाउँपालिका–९ सिपाटारबाट काठमाडौंका लागि छुटेको हेलम्बु यातायातको बा २ ख २७१५ नं. को बस आज बिहान सडकबाट २०० मिटर तल खस्दा कम्तीमा सात जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ५० भन्दा बढी घाइते रहेको स्थानीयवासी राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिए । स्थानीयवासी आचार्यका अनुसार दुर्घटना भएको बसले यात्रुलाई अझै थिचिरहेकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न सक्नेछ । स्काभेटर ल्याएर उद्धार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
बिहान ८ बजे भोटसिपा गाउँबाट हिँडेको हेलम्बु यातायातको बस १० बजेतिर कच्चि सडकबाट तल खसेर क्षतिग्रस्त भएको थियो। उद्धार कार्य चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले खबर पाएलगत्तै घटनास्थलमा पुगेर स्थानीयसँगै उद्धारकार्यमा जुटेको थियो ।
गाडीमा झण्डै ७० जना सवार रहेको अनुमान गरिएको छ। कच्ची सडक र क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाएका कारणले दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ।
Previous articleआइतबार सार्वजनिक विदा, २० घण्टा नेपाल बस्दा सीले के–के गर्दैछन् ?
Next articleप्रहरी दिवस : प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, अब म हाँस्ने कि रुने ?